Offshore Company Formation Mhando, Makomborero, Mariro yeInorporation
Top Recommended Offshore Company Mazano
Izvi zvinotevera mahofisi emakambani ekumahombekombe anopa kubatanidzwa kwekuchengetedzwa kwemari, kuchengetedzwa kwemhosva uye yega. Unogonawo kuona iyo kuenzanisa chati for offshore LLCs nekudhonza iyi link.
Nevis - Kuzvimirira, Kunakidzwa uye Kuramba. Dzidza kuti nei chikepe cheNevis chiri cheimwe mitemo yakakurumbira nhasi. Pamusoro pazvose, chengetedza yakasimba pane imwe nzvimbo yekunze: the Nevis LLC.
Belize - Makambani, IBC (International Business Company) uye Banking. Mukuwedzera, iwe uchaona kuti Belize inopa hutano hwakasiyana-siyana hwekubatanidzwa kwemahombekombe. Somuenzaniso, i Belize LDC, Belize's alternative to the LLC inopa humwe hutano hwakanaka hwekuchengetedzwa kwemari.
Bhahamasi - Mutero Werusununguko, Unhu Hwokuda uye Kudhura Kwemari. Mukuwedzera, unogona kuverenga pamusoro pemhando dzakasiyana-siyana dzekuwana iwe muBahamas.
British Virgin Islands - Maximum Security, Asset Protection uye Privacy. Uyezve, iwe unogona kutsvakurudza kuti makambani ekukurumidza uye IBC ari muBVI anobatsira sei kuchengetedza pfuma yako.
Dzvanya pano kuti uwane runyoro rwakakwana: offshore company jurisdictions.
Offshore makambani ndiwo masangano akadai semakambani kana makambani asingakwanisi kutora (LLCs) ayo akaiswa kunze kwenyika yekugara. Vanhu vanobatanidza makambani ekumahombekombe vanoita kudaro, pakati pezvimwe zvinhu, kana vachifarira kuchengetedzwa kwezvinhu, kushandiswa kwebhizimisi nekuchengetedza mari. Mukuwedzera, ruzivo rwuri pasi apa runopfupikisa zvikonzero nei vanhu vachiumba zvinhu izvi:
Imari Kuponesa (zvichienderana nehutongi hwako)
Pano, iwe uchaona runyora rwezvimwe zvemahombekombe mararamiro ekuchengetedza maitiro, mari yavo uye mari. Mukuwedzera, chikamu chino chinokurukura zvinhu zvinokosha zvekugadzirira kwekunze kwenyika, kusanganisira makambani, mabhizimisi ekumahombekombe uye matariro, maitiro avakaitwa uye nei. Zvinonyanya kukosha, tinokwanisa kugadzira kambani yebhangi yekambani yekambani imwe neimwe yaunoshandisa kuburikidza nebasa redu. Uyezve, unogona kudzidza nezve offshore banking pano.
Chekutanga, vazhinji vari kunze kwenyika vane zvigaro zvepamutemo zvepamutemo kune avo vanotsvaka kuchengetedzwa kwepfuma uye mari yehupfumi. Funga izvi yebhizimusi yekambani inovaka zvikwereti uye chokwadi. Zvinoshamisa, the US ine 4.4% yehuwandu hwevanhu, asi 70% yevatongi venyika uye 96% yemhosva dzenyika. Uyezve, kusiyana nedzimwe nyika munyika, hatina munhu anorasika anopa mvumo yepamutemo. Pane zvakasiyana, kune dzimwe nyika uyo anorasikirwa nemhosva anofanira kubhadhara zvose mari yake gweta uye vadzivisi vake. Nokudaro, mitemo yavo inopomera mhosva zvishoma.
Offshore Company = Moat neAlligators
MuUnited States kana iwe uri kubatanidzwa mukupomerwa uye kukunda, iwe uchiri kunze kwezvaunoita zvemari, saka iwe uchiri kurasikirwa. Pane rimwe divi, Kuteerera kambani yekunze kwakaoma zvikuru. Semuenzaniso, ngatitaurei muvengi wepamutemo akasarudza kupomera kambani yako yekunze. Anogona kuisa bhadha kuti nyaya yacho iendeswe kuburikidza nebhodhi rekuongorora. Ivo, ivowo, vanoona kana kana kwete nyaya yacho ingatoita kudare. Kazhinji, chisungo hachina kudzorerwa. Somugumisiro, kwete vanhu vakawanda vanopomera mhosva. Saka, iyi inzvimbo yakasimba yekuchengetedzwa kwemhosva. Mune mamwe mazwi, kungoshandisa zvinyorwa zvemitemo zvepamutemo zvepamutemo iwe unotadzisa zvakadzama zvinetso zvemunhu anokutambudza.
ne a Nevis LLC, semuenzaniso, 2015 kuchinja akagadzira chikwereti kutumira $ 100,000 bond vasati vatokwanisa kuunza chero chiito chekutora mutongo kupikisa nhengo iyo kambani. Vatongi veNevvis vakavandudza mitemo mu 2018 vachipa maNevis makambani simba rekuisa hutano chero chikamu. Mari inoponeswa nekuchengeta mari yako kure kurega kuisa maziso, nokudaro, kudzivisa kutongwa kwemhosva, kuchengetedza zvinhu zvako kubva kumatare uye kuwedzerwa mune zvemari ndezvimwe zvezvikonzero zvakawanda zvekuenda kune imwe nzvimbo. Chimwe chirevo chakanakisisa cheL LLC ndicho Cook Islands. Zvichiitika, iwe unogona kuverenga nyaya ino pane Nevis LLC vs. Cook Islands LLC iyo inofanidza nhengo mbiri.
Mitauro yeOffshore Companies
Chimwe chinhu chinokosha ndechokuti makambani ekumahombekombe anopa zvakawanda mari yakawanda kupfuura humba hwemhuri marudzi. Mienzaniso yeiyi inosanganisira makambani, makambani asingakwanisi kubhadharwa kana makambani emabhizimisi enyika (IBCs). Kune mahofisi mazhinji emakungwa ekunze ane mimwe mitemo inofadza iyo US, Canada kana UK. Idzi nharaunda dzinowirirana kune dzimwe nyika. Somugumisiro, mitemo yavo kuratidza hurombo hwehuwandu, huri hwega kune vatungamiriri nevatungamiriri uye kusava nehanya kune dzimwe nyika kutonga.
Sezvo zvinogona kuonekwa, izvo zvinokonzerwa nedare rinoparadza muAmerica mubhizinesi rakakwirira. Mushure mezvose, vatongi vakawanda vanongotsvaga kuti vararame. Muzvokwadi, vamwe havana kumboona mukati mematare edzimhosva. Izvi zvinoreva kuti vanoshandisa mvumo yepamutemo kuti vamanikidze vatungamiriri vebhizimisi mumisha isina musoro. Iwe unogona kudzidza zvakawanda pamusoro pekutsvaga kwekambani yekunze incorporation inogona kubatsira nekudzivirira kwako zvinoda kudana OffshoreCompany.com kana by Kuzadza fomu iri papeji ino. Tinoumba zviuru zvemabhizimisi masangano gore negore, kubatsira zviuru zvemaAmerica nekudzivirirwa kwavo uye zvido zvevamwe uye kupa mutungamiri kuburikidza nekambani yese yekwenyika mamiriro ezvinhu.